Indlu esemaphandleni enamanzi kunye nendawo yokuhlala yabucala kwiGrand Lake - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni enamanzi kunye nendawo yokuhlala yabucala kwiGrand Lake
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJeffrey
Indlu yamaplanga esechibini ePadley 's Point! Le ndlu yamaplanga ilungiswa ngokupheleleyo ibe nekhitshi elinefenitshala kodwa isenayo loo ndlu isemaphandleni (igumbi elikhulu elinye). Indawo yegumbi lokulala inokumkanikazi phezu kwebhedi enkulu elala abantu abayi-4, kwaye isofa kwindawo yokuphumla yisofa yokulala (ukumkanikazi). Indlu ikwiimitha eziyi-5 ukusuka kwindawo yokungena yabucala kunye nedokhi yabucala.
Ukuzonwabisa ngaselwandle kukufutshane! Ukuqubha, ukuloba nokuqhuba isikhephe kunokonwatywa kwindawo yakho yabucala yaselwandle!
Ngokuqinisekileyo uza kukwazi ukuyibona yonke indlu kunye nendawo yokungena, idokhi kunye neyadi ejikeleze indlu. Idokhi inendawo yokutsala nokushiya isikhephe sakho kunye nebhodi yokudayiva, kodwa nceda ulumke uze untywile emngciphekweni wakho.
4.98 · Izimvo eziyi-87
Ukonwaba ngaselunxwemeni kukufutshane nomnyango wakho kwiGrand Lake. Ukuqubha, ukuloba, kunye nokutyibilika ekhephini kunokonwatywa kwindawo yakho yabucala yaselwandle! Njengebhonasi eyongezelelekileyo, unokufumana iindawo ezahlukeneyo zokuqesha imidlalo yamanzi kufutshane.
Isiqithi esihle seMonkey kunye neendawo zaseShangri-La zinezinto zokuzonwabisa, iivenkile zokutyela eziselunxwemeni, ibhari entle kunye nezinto zokugrilla, kunye neekhilomitha eziyi-3 ukusuka ekhaya lakho.
Yiya kwiilinki zaseShangri-La, ibala legalufu lokuqala laseOklahoma elinendawo entle yokubuka iGrand Lake kuyo yonke le ndawo. Emva koko, yitya kwenye yeevenkile zabo zokutyela ezikumgangatho ophezulu uze ubone iindawo ezintle zale ndawo ingaselunxwemeni.
Abantu abathanda indalo bamele bathathe uhambo losuku oluya eBernice Area eGrand Lake State Park - ekumgama nje wemizuzu eyi-12 xa behamba ngemoto. Le paki intle ineekhilomitha eziyi-88 zentlango emangalisayo yaseOklahoma enonxweme lokuqubha, iindlela zokunyuka intaba, ukuqesha isikhephe kunye nokubuka izilwanyana zasendle!
Sisoloko sifumaneka ngomyalezo nefowuni ukuba kuyimfuneko!